Fankalazana ny andron'ny manamboninahitra teto anivon'ny fiadidian'ny Praiminisitra | Primature
Fankalazana ny andron’ny manamboninahitra teto anivon’ny fiadidian’ny Praiminisitra
Lapan’i Mahazoarivo, ny 12 janoary 2022 – Toy ny isan-taona dia nankalaza ny andron’ny 12 janoary ireo manamboninahitra eto anivon’ny Primatiora, fankalazana izay teo ambany fitarihin’ny lieutenant Ndimbimalala Dinalalaina, officier de service général eo anivon’ny Bataillon de Sécurité de la Primature.
Nisolo tena ny Praiminisitra nandritra izao fotoana izao ny talen’ny kabinetra miaramila, ny jeneraly Zafisambo Ruphin Fortunat Dimbisoa, ka notolorana ny « oie traditionnelle » niaraka tamin’ireo manamboninahitra zokiny eto anivon’ny fiadidian’ny Praiminisitra.
Raha zohina hoy izy ny tantara niandohan’ny 12 janoary dia manamarika ny firaisankina, ka tokony ho hita taratra amin’izany ny fifanampiana, ny fifampitsinjovana ary ny fifankatiavana.
Notsiahiviny ihany koa fa tokony manana fahalalana mba hahafahana mametraka ny « leadership » ireo manamboninahitra, mila mahay manaraka ny fitsipi-pifehezana na « disciplines » ihany koa, ary indrindra indrindra ny fahaiza-manao.
Teo ampamaranana ny lahateniny dia nitsodrano sy nirary soa fa indrindra fahasalamana ho an’ireo manamboninahitra rehetra ny talen’ny kabinetra miaramila.
← Fiarahabàna ny Praiminisitra sy Ramatoa vadiny
Conseil du gouvernement du Mercredi 12 janvier 2022 →
Tatitra ankapobeny 2020 teo anivon’ny Tafika Malagasy
Teny fampidirana nataon’Andriamatoa Praiministra nandritra ny Fihaonan’ny Governemanta sy ny Solombavambahoaka
Andriamatoa Filoha Lefitry ny Antenimieram-pirenena, Ianareo Mpikambana ao amin’ny Birao maharitra, Ianareo minisitra mpikambana ao amin’ny governemanta, Ianareo solombavambahoaka,Isika rehetra